पर्यटकका लागि मनोरञ्जनसहितको पार्टी बस सञ्चालन हुँदै ! - Sagarmatha Online News Portal
पर्यटकका लागि मनोरञ्जनसहितको पार्टी बस सञ्चालन हुँदै !
लोकचन्द्र थापा/काठमाडौं । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि अतिरिक्त मनोरञ्जनसहित गन्तव्यमा पुग्ने सुविधा भएको पार्टी बस सञ्चालन गरिने भएको छ । बसभित्रै डिजे, बार, धूमपान कक्ष, पेन्ट्री, वाइफाइ, डान्स फ्लोर, एयर कन्डिशन, शौचालय आदिको सुविधा रहेको पार्टी बस पहिलोपटक काठमाडौँ भित्र्याइएको हो । रियल इकोनोमिक सस्टेनेबल सोसाइटी नेपाल (रेस नेपाल) ले हालै उक्त बस भित्र्याइएको थियो ।
मनोरञ्जनको अतिरिक्त सुविधा चाहने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै पार्टी बस सञ्चालन गर्न लागिएको कम्पनीका निर्देशक अशोक शर्माले जानकारी दिए । पर्यटकका लागि फरक सुविधा तथा जन्मदिनको पार्टीलाई मध्यनजर गरी ल्याइएको पार्टी बसका निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरिने र ट्राफिक नियमअनुसार सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।
एक साताभित्रै पार्टी बस काठमाडौँमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । भारतको टाटा मोटर्सले उत्पादन गरेको बसको च्यासिललाई पार्टी गर्न मिल्ने थलोका रुपमा परिमार्जन गरिएको छ । बसभित्र सिट हुँदैन । सोफा शैलीमा दुईतिर काउच राखिएको छ । यस बसमा एक पटकमा ३६ जनाले यात्रा गर्न सक्छन् । बसभित्रै मदिराको सुविधा र खाना तताउने उपकरणसहितको बार रहेको छ । बसको अघिल्तिर डिजेले सङ्गीतको आनन्दमा मदिरा तथा कफी पिउँदै यात्रा गर्न सकिनेछ ।
निर्देशक शर्माका अनुसार यो पार्टी बसको प्रतिबस साढे तीन करोड पर्छ । परियोजनाका लागि सात करोडभन्दा बढी लगानी गरिएको छ । एयरपोर्ट पिकअप, घुमफिर, पिकनिक, विवाह, निजी कार्यक्रम आदिमा यो बस प्रयोग गर्न सकिनेछ । बस प्रयोग गर्न एक हजार प्रवेश शुल्क पर्छ । विशेषगरी बिहे र पर्यटकका लागि यो बस उपयुक्त हुनेछ ।
नेपाल भ्रमण वर्षको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको पार्टी बस क्रमशः अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि लैजाने कम्पनीको योजना छ । ग्राहकलाई मनोरन्ञ्जन र रमाइलो वातावरणमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा पु¥याउने उद्देश्यसहित सेवा सुरु गरिएको निर्देशक शर्माको भनाइ छ ।
इन्टेरियर डिजाइन, कलर, लाइट्स, म्युजिक र गुणस्तर सेवा पार्टी बसको मुख्य आकर्षण हुन् । बसमा आधुनिक प्रणालीबाट सुसज्जितका साथै सुरक्षाका सबै मापदण्डलाई ध्यान दिइएको छ । “हाम्रो उद्देश्य ग्राहकलाई विभिन्न खालका मनोरञ्जन प्रदान गर्दै अविस्मरणीय क्षण सिर्जना गर्नु हो । पर्यटन प्रवद्र्धन तथा राजधानीलगायत देशका विभिन्न गन्तव्यमा मनोरञ्जनका अद्वितीय विषयवस्तु प्रदान गर्नु हो,” निर्देशक शर्माले भने ।